Malunga Nathi- iBeijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd.
IBeijing Heweiyongtai Sci&Tech Co.,Ltd
I-Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. lishishini le-hi-tech ekhethekileyo ekwenzeni nasekuthengiseni izixhobo zoKhuseleko, iimveliso ze-EOD, imveliso yokuHlangula Uphando lolwaphulo-mthetho, njl.
Umbono wethu kukubonelela ngeemveliso zamva nje kunye netekhnoloji ngelona xabiso lifanelekileyo kubathengi bethu, okona kubaluleke nangakumbi lumgangatho ophezulu.Namhlanje, iimveliso kunye nezixhobo zethu zisetyenziswa ngokubanzi kwiziko lokhuseleko loluntu, inkundla, umkhosi, isiko, urhulumente, isikhululo seenqwelomoya, izibuko.
Iofisi ephambili iseBeijing, ikomkhulu laseTshayina.Kukho ngaphezu kwe-400 yeemitha ezizikweri ezibonisa igumbi apho umboniso kufutshane namakhulu eentlobo zeemveliso ezixhotyiswe kakuhle kunye nezixhobo.Umzi-mveliso useLianyungang, kwiphondo laseJiangsu.Sikwaseka iziko le-R&D eShenzhen.Iintonga zethu zonke zinobuchule obufanelekileyo kunye neengcali zolawulo ukubonelela abathengi ngenkonzo eyanelisayo.Ngokuphendula kwisicwangciso sophuhliso lwesizwe "Ibhanti enye kunye neNdlela enye" ​​(OBOR), siye saphuhlisa ii-arhente kumazwe angaphezu kwama-20 ahlukeneyo.Iimveliso zethu zinemfuno enkulu ekhaya nakwamanye amazwe.
Iimveliso zethu eziphambili ezenziweyo kunye nezixhobo zilandelayo
Izixhobo zokuHlola uKhuseleko
Isixhobo esiphathwayo somtshini wokuqhushumba, isikena esiphathwayo seX-reyi, isitshixo solwelo esinoBubungozi, isitshixo esingenamda esingenamda njl.njl.
Anti-terrorism & Surveillance Instruments
I-UAV Jammer ephathwa ngesandla, iJammer ye-UAV eLungisiweyo, iNkqubo yoPhando ngoMbono woMbala wokukhanya ophantsi, ukuMamela ngeNkqubo yoDonga.
I-EOD Robot, i-EOD Jammer, iSuti yokuLahla iBomb, iHook kunye neKit yeLayini, i-EOD Telescopic Manipulator, isitshici seMyini njl.njl.
Ukubonelela ngenkonzo engaphaya kwexabiso lemarike kunye nokulindelwe ngabathengi ngokubambelela kumgaqo othi “Ukwaneliseka Kwakho, Umnqweno Wam” ukufezekisa ukwaneliseka kwabathengi ngeenxa zonke.
Abasebenzi ngowona mthombo uxabisekileyo weshishini.Kukuzibophelela ekuhlonipheni ulwazi, ukuhlonipha abantu ngabanye kunye nokukhuthaza nokunceda uphuhliso lomntu ngamnye.
Imfezeko ngumqathango wokuqala weshishini ukugcina isiseko kunye nophuhliso;ukugcina isithembiso ngumgaqo osisiseko wolawulo lwethu lokusebenza.
“Umsebenzi wesithethe kukuvisisana” ngumgaqo-nkqubo wokujongana nemicimbi.Inkampani icela bonke abasebenzi ukuba bomeleze ukusebenza kweqela kunye nokujongana nobudlelwane nababoneleli, abathengi, abasebenzi kunye namanye amaqela afanelekileyo anesimo sengqondo esixabisekileyo.
●Ukusebenza kakuhle kugxilwe
Inkampani icela abasebenzi ukuba benze into elungileyo ngendlela eyiyo, ilinganisa ukusebenza kweshishini ngokufanelekileyo kwaye ikhuthaza abasebenzi ukuba benze inkqubela phambili kunye nokudala ukusebenza okuphezulu.
Ukuzinza, ukuba nzulu kwaye uthule yindlela iinkokeli zesigqeba kunye nabasebenzi abasebenza ngayo.
umboniso wamazwe ngamazwe
Cofa eli qhosha ukukhuphela ippt
Qhagamshelana nathi ngolwazi oluthe kratya
Iskena esiphathwayo seX-Ray, Telescopic Manipulator Arm, Ukulandela umtshini oqhumayo, I-X-Ray Baggage Scanner, Inkqubo yokuHlola yoKhuseleko lweX-Ray, Ibhola lokugada,